तातो पानी पिउँदा शरिरमा के हुन्छ ? तपाईलाई थाहा छ ? जान्नुहोस् १० फाईदा । - Birgunj City
तातो पानी पिउँदा शरिरमा के हुन्छ ? तपाईलाई थाहा छ ? जान्नुहोस् १० फाईदा ।
बिरगंज सिटी १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १३:०९मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) १११४ पाठक संख्या
तातो पानी पिउँदा शरिरमा के हुन्छ ? तपाईलाई थाहा छ ? ३ हरेक दिन ८ देखि १० गिलास पानी शरीरको लागि आवश्यक हुन्छ र दिनमा तीन पटक तातोपानी पिउने बानी बसाउनुभयो भने तपाईंंको शरीर बिरामी हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ । यसका फाइदाहरु –
१. तौल कम गराउँछ
तपाईंंको तौल लगातर बढिरह्यो र धेरै कोसिसपश्चात् पनि कुनै असर गरेन भने तातो पानीमा कागती मिसाएर लगातार तीन महिनासम्म पिउने गरेमा तपाईंले फरक अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं स्वास्थ राम्रो चाहनुहुन्छ भने खाना खाएपछि १ गिलास तातो पानी खाने गर्नुहोस् ।
२. चिसो हुनबाट बचाउँछ
यदि तपाईं अस्वस्थ हुनुहुन्छ, छातीको चिसोले सताइरहेको छ भने तातो पानी पिउन लाभदायक हुन्छ । तातो पानी पिउनाले गला पनि ठीक हुन्छ । यसको सेवनले आराम मिल्छ ।
३. महिनावारीको दुःखाइ कम गराउँछ
महिनावारीको दुःखाइ प्रायः महिलाहरुको नियमित कामलाई नै रोकिदिन्छ । तातो पानीले यो दुःखाइलाई कम गर्न सक्छ । यसरी तातो पानीले पेटको दुःखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ ।
४. शरीर सफा गराउँछ
तातो पानी पिउनाले शरीर सफा गर्नलाई मद्दत मिल्छ । र यसले शरीरका धेरै खराबीहरुको सजिलैसँग सफा गरिदिन्छ । तातो पानी पिउनाले शरीरको तापमान बढ्न जान्छ । जसले पसिना निकाल्छ र यसको माध्यमबाट शरीरको विकारलाई बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ ।
५. अनुहारमा कलिलोपना आउँछ
तपाईंको अनुहारको छालाले तपाईंलाई दुःखी बनाएको छ भने चिन्ताको नलिनुहोस् । आजैदेखि तातो पानी पिउन सुरुवात गर्नुहोस् केही हप्तामै परिवर्तन देख्नुहुन्छ । छालाका अंगहरु नरम हुनेछ र चमक पनि बढ्नेछ ।
६. कपालको लागि पनि फाइदाजनक गर्छ
तातो पानी कपाल र छाला दुवैको लागि फाइदाजनक छ । यसले कपाललाई चमकदार बनाउछ र बढाउन पनि मद्दत गर्दछ ।
७. पेटलाई दुरुस्त राख्छ
तातो पानी पिउनाले पाचन क्रियालाई सहज बनाउँछ । साथै ग्यासको समस्यालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ । खाना खाएपछि १ गिलास तातो पानी पिउने बानी गर्नुस् । यसो गर्नाले खानालाई छिटै पचाउँछ र पेट हल्का हुन्छ ।
८. रक्त सञ्चारलाई सन्तुलन गर्छ
शरीर सुचारु रुपमा चल्नको लागि रक्त सञ्चार पूरै शरीरमा सही हुन आवश्यक हन्छ । र यसको लागि तातोपानी पिउनु लाभदायक हुन्छ ।
९. ऊर्जा बढाउँछ
सामान्य पानीको तुलनामा कागती राखेर तातो पानी पिउनाले तपाईंको ऊर्जा बढेर जान्छ । र पाचन प्रणाली पनि सन्तुलन हुनेछ ।
१०. जाडोको दुःखाइ कम गर्छ
तातो पानीले जाडोको दुखाईलाई कम गर्छ । हाम्रो माशंपेशीको ८० प्रतिशत भाग माशंपेशीले बनेको हुन्छ । तातो पानीले माशंपेशीको दुःखाइ पनि कम गर्छ ।
कोरोनासँग लड्न खानुहोस् यी भिटामिन, जस्ले प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ र संक्रमण हनुबाट बचाउँछ
गर्भावस्थामा होली खेल्दा के असर हुन्छ ?